ဟေ့ဂိုဏ်း:ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳညမ်းမီးေ။ ဆိုနောက်ထပ်သွားမီ၊ငါသည်သင်တို့ကိုစဉ်းစားအရေးကြီးအကြှနျုပျအဘို့အဖော်ပြထားသောအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်မှာအမှန်တကယ်လှပတဲ့ဂိမ်း–ခဲ့သောအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကနေလွန်ခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန္းစတင္ဖြ! နောက်ကျောထိုနေ့ရက်ကာလ၌၊အလွန်အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာရေးသားသူများအတွက်အကြောင်းဖြစ်ချင်မှဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူကောင်းဂရပ်ဖစ်နှင့်တစ်ဦးကောင်းကစားအတွေ့အကြုံ:အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းမီးေဂိမ်းများခဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်။, ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ၊အမှုလုပ်ငန်းအများကြီးတစ်ငရဲပိုရင့်ကျက်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲသင်ပေးခြင်းအညီအရေးယူချင်–ပဲသုံး WebGL ပတ်ပတ်လည်ဤအချိန်! အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်အမေရိကန်မှလွဲမီးေ၊ဒါပေမယ့်အဓိကတဦးတည်းရိုးရှင်းသောအချက်ကိုမရှိတော့ခြင်းထောက်ခံခြင်းဖြင့်အများဆုံး။ ကိုသတင်းကောင်းအကြောင်းနေစဉ်လူအတော်များများဟာလိုလှပတဲ့ဂိမ်းဟာအဘယ်သူမျှဒေါင်းလုပ်ဆွဲ၊ကျနော်တို့ရရှိပါသည်တစ်လှည့်ကွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ကျီလက်တက်ကိုဖွင့်ဖို့ချည်နှောင်ကျေနပ်! ပိုမိုလေ့လာသင်ယူစိတ်ဝင်စား? ဖတ်အောက်တွင်ချမယ်ပဲဖိတ်!, နောက်တစ်နည်း၊သင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်အခုအချိန်မှာညမ်းမီးေဂိမ်းများ၊အဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုရင်းသင့်သည်–ဒါပေမယ့်ကိုယ့်သေချာသင်နားလည်ရန်ကြွလာသောအခါအရွယ်ရောက်ပြီးအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားနှင့်အတူမီးေအာရုံစူးစိုက်၊ကျနော်တို့အသွား-မှဂိုဏ်း။
သေချာအောင်သင်သဘောပေါက်နားလည်ကြောင်းကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်အလေးအနက်အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း၊ငါကြကုန်အံ့မှသင်ရှေ့ဆက်အချိန်သိတဲ့ညမ်းမီးေဂိမ်းများသည်သင်လက်လှမ်းပေးဆောင်စရာမလိုဘဲ။ ကြည့်ပြီးပတ်ပတ်လည်မှာအားလုံးယှဉ်ပြိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်အကြီးအကျယ်လမ်းကြောင်းသစ်၏သြင္းလူတို့လက်လှမ်းများအတွက်ဦးတည်သောရိုးရိုးမကယ်မလွှတ်၊ပြီးတော့ပေးခြင်းလူခွဲတန်းတူဂိမ်းများသောသူတို့ကိုထားခဲ့။, ပေးကမ်းကိုရှောင်ရှားအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ရှိအစိတ်ပျက်ကျင်းပတဲ့၊ကျွန်တော်သွားမယ့်အကြောင်းပြောညမ်းလှပတဲ့ဂိမ်းသင်တို့ဥစ္စာဖြစ်ဝင်ရောက်ဖို့လိုဘဲပေးဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမ။ ကျနော်တို့လက်ရှိတွင်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကစပွန်ဆာပေးအယူနှင့်ကြော်ငြာများ–မပူပါနဲ့၊ဤမ-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့်ချုပ်သမားလုပ်မျက်နှာသို့အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းကစားအများပြည်သူဘယ်သူထွက်ရှိပါတယ်ႏွင့္တယ်! ငါတို့သည်လည်းအများထောက်ခံမှုန္ေဆာင္မႈသင်ဝယ်ယူရန်နိုငျသောသင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်:ဤသင်အားငါပေးမည်အမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါရပ်နှင့်အရည်အသွေးအသက်၏ဒြပ်စင်များနှင့်စိတ်ကိုသင်အသုံးဝင်သောရှာတွေ့သင့်ရဲ့ရှာပုံတော်ကမ္ဘာအနှံ့အပြာ။, သတိရကတည်းကသင်ပူးပေါင်းနိုင်ပါဒီနေရာမှာအခမဲ့၊လည်းဆိုလိုသည်သင်ထွက်ခွာနိုင်သင်လိုချင်တာအခါတိုင်း! ကျွန်တော်တို့မပေးပါဘူးသင်သည်အဘယ်သို့ချင်တယ်၊ကျွန်တော်တို့အများကြီးပိုဖွယ်ရှိသည်ဆင်းရဲခံရရလဒ်အဖြစ်၊အယ်?
အစပိုင်းတွင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းမကြည့်ခဲ့တော့ပူရဲ့အဓိကအားဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခါကျွန်တော်ပေးဂိမ်းကစားထွက်ရှိသုံးစွဲမီးေဒေတာဘေ့စခဲ့၊ဒါဟာ၏ကန့်သတ်အမြင်အာရုံအရည်အသွေး။ ဒီရက်တစ်ဂိမ်းအသွင်အပြင်နှင့်ပြဇာတ်ကောင်းစွာအားလုံးမဟုတ်ပါကြောင်းမကောင်းတဲ့–အဘယ်ကြောင့်သောအပြောင်းကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအင်ဂျင်အတွက်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရန်အချို့ကိုသင်၏အကောင်းဆုံးမြင်ရလိမ့်မယ်အစဉ်အဆက်အွန်လိုင်းရှာတွေ့။ ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ဒါကြောင့်အတူအထင်ကြီးတစ်ခုလုံး၏အရည်အသွေးအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကပူဇော်ဖို့ရှိသည်သောသင်ကျနော်တို့စစ်မှန်စွာလူအများစုကထင်ခံရဖို့သွားနေကြပါတယ်ရောင်းချပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်၏ကစားဂိမ်းကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။, သတိရအဲဒီအတပြင်လုံးကိုအတွေ့အကြုံလည်းအခမဲ့–ဒါကြောင့်သင်နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးနှင့်ဟုတ်ကဲ့၊ကျနော်တို့ကအမှန်တကယ်သင်ဖေါ်ပြသောအခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းကိုအတွက်ဤနေရာသက်သက်ဂုဏ်ပြည့်စုံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကလည်းသေချာဖန်ဆင်းတော်ကြောင်းအစွမ်းလူများအတွက်ချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအပေါ်အနိမ့်စက်နေဆဲလွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေပါသည်။ ငါတို့သည်မကျင့်ချင်မှဆင်းရဲခံရလျှင်သင့်ရဲ့္နှင့် GPU များမှာအနည်းငယ်သာထွက်၏ရက်စွဲအကြောင်း–ကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမည်သူမဆိုများအတွက်အခုလို?, ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်မနှုတ်နိုင်သားရဲဂရပ်ဖစ်အတွေ့အကြုံ၊ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မရအဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်နှင့်အမြင်ကအားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ? သဘောမျိုးတွေအများကြီးသင်သည်ငါ့ကိုတောင်းလျှင်!
စောင့်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ခပ္ေမွာင္ေမွာင္၏ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူးအနေနဲ့လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပေ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်စောင့်ရှောက်အဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ရှိမင်္ဂလာ၊ကျနော်တို့ကိုပေးဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုသူတို့ရှာ။ လက္ရွိကားမီးေဂိမ်းအပေါ်မှာထိုင်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုပတ်ပတ်လည် ၈၀ ဂိမ်း၊အသစ်တစ်လုံးနှင့်အတူထည့်သွင်းပတ်ပတ်လည် ၁၀ ဆဟာတစ်နှစ်ကို။ ငါတို့သည်လည်းတူသွားပြန်ချိန်ဖို့အချိန်ကနေပြီးပိုလန်တက်ခေါင်းစဉ်ကျနော်တို့ပြီးသားပြန်လွတ်လာ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ထည့်သွင်းအသစ်အကြောင်းအထုပ္အဖြစ်နှင့်သောအခါသင့်လျော်သော။, ကျနော်တို့အပေါ်မူတည်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အများကြီးဤအမှုအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဂိမ်းများသူတို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်–ကယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောရလဒ်များကိုနှင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဆက်လက်အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုလွန်းမဝေးအနာဂတ်။ ကားမီးေဂိမ်းများလည္းဖက်ဆာဗာနှင့်တရားဝင်ဆွေးနွေးကြောင်းအမှန်တကယ်ကောင်းသောအဘို့အထွက်ရောက်ရှိဖို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏နားကိုဖွင့်ပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုဆိုအပြုသဘောသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာ၊ကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့! အပိုအချက်ပေးပြီး၊အကောင်း:ဒါကြောင့်ကိုယ့်ခွင့်ပြုညမ်းလှပတဲ့ဂိမ်းဖြစ်လာဖို့အပူဆုံးအစက်အပြောက်များအတွက်အွန်လိုင်းရောင်းရင်းစွဲနေသောညစ်ညမ်း။, သူမကဲ့သို့အသံ၏အကြောင်း၊လက်ျာ?
ယခုအားဖြင့်၊သင်ဖြစ်နိုင်တာကညမ်းမီးေဂိမ်းများပါဘူးပတ်ပတ်လည်ရှုပ်ထွေး၊မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလာကြတယ်မှကြွလာသောအခါပေးကမ်းလူအဆိုပါရိုးသားစွာအမှန်တရားအကြောင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကပူဇော်ဖို့ရှိသည်။ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုအတွက်အာကာသနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကူအညီ၊ငါတို့သည်ပြသနိုင်လူတိုင်းသည်အခြားအကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးခြင်း-အချက်အချာ XXX တကယ်အတွေ့အကြုံသောသူအပေါင်းတို့သည်မဖြစ်။ အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးပူးပေါင်းပါဝင်လာအပေါ်အပြာလှပတဲ့ဂိမ်းဖြစ်အပျက်? ကျေးဇူးပြုပြီး:သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးအခုအချိန်မှာအပေါ်စတင်ရန်သင်၏အသက်တာသစ်ကိုအတွင်းအပြင်!, ကျေးဇူးအများကြီးစာဖတ်ခြင်းများအတွက်–သင်၏နောက်လာမည့်အစည်းအဝေး၏ဂိမ်း-လောင်စာ fapping အားဖြင့်အများဆုံးပျော်စရာ။ အလွန်ချစ်–သင်သည်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်။